6 कदम अमेरिका मा एक शरणार्थी वा आप्रवासी रूपमा आफ्नो सही काम पाउन | USAHello | USAHello
द्वारा मोशाले Idris मई 30, 2018 जब र करियर, आवाज
6 कदम अमेरिका मा एक शरणार्थी वा आप्रवासी रूपमा आफ्नो सही काम पाउन
बनाउन आफ्नो क्यारियर खोज को बाहिर सबै भन्दा: तपाईं अमेरिका मा आफ्नो सही काम कसरी पाउँछौं?
सामन्यतया, शरणार्थी वा आप्रवासी रूपमा अमेरिका मा एक काम फेला एक कठिन प्रक्रिया हो. Newcomers विभिन्न कौशल संग संयुक्त राज्य अमेरिका आउन, र जागिर फेला को अनुभव हामी सबै को लागि फरक छ.
केही मानिसहरू लागि, यो एक प्राणपोषक अनुभव छ. अरूको लागि तर, जागिर फेला कठिन र पीडादायी छ. तैपनि, हामीलाई सफल र अमेरिका मा हाम्रो नयाँ जीवन निर्माण गर्न को लागि एक काम फेला महत्वपूर्ण छ. यस लेखमा, म आफ्नो काम वा पेसा खोज तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ कि केही सुझावहरू साझेदारी गरिनेछ.
1. उपलब्ध के लिन तर कहिल्यै बसोबास.
तपाईं सुरुमा सही काम प्राप्त गर्न को लागि यो कठिन हुन सक्छ. यो समय र प्रयास को एक धेरै लिन्छ देखि. तपाईं खोजिरहेका छन् स्थिति पहुंच बाहिर छ भने त, तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि आवश्यक के गर्नुपर्छ. सुरुमा, जहाँ तपाईं मुद्रा बनाउन सक्छ कुनै पनि काम पाउन. यसैबीच, जहाँ तपाईं नयाँ सीप विकास र कार्य अनुभव को विभिन्न प्रकारका पाउन सक्छौं स्थितिहरू हेर्न जारी. सहज प्राप्त छैन र कम लागि बसोबास! तपाईं सधैं राम्रो अवसर लागि देख गर्नुपर्छ.
2. राम्रो अवसर खोजेर आफ्नो सही काम पाउन.
जब केही हामी काम पाउन, हामी हाम्रो दैनिक दिनचर्या मा फँस प्राप्त. हामी त्यही समयमा उठ, र हामी नियमित रूपमा नै मान्छे संग काम गर्न जाने. यो हाम्रो सान्त्वना क्षेत्र हुन्छ, र हामी यसको लागि बसोबास. जबसम्म हामी जीवनमा हाम्रो वर्तमान स्थिति चाहनुहुन्छ, हामी राम्रो अवसर सधैं खोजिरहेका गर्नुपर्छ. तपाईं काम पछि थकित छन् भने पनि. जस्तै काम बोर्डहरू हेर्न केही समय लाग्न indeed.com वा monster.com यदि तपाईं को लागि लागू गर्न कुनै पनि भूमिका छ हेर्न. आफ्नो स्थानीय पुस्तकालय वा समुदाय कलेजमा अंग्रेजी कक्षाहरू लिएर तपाईं आफ्नो संचार सीप सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जो आफ्नो काम खोज सजिलो बनाउनेछ.
3. आफ्नो कौशल सेट अपग्रेड.
तपाईं आज संयुक्त राज्य अमेरिका बस्न पर्याप्त भाग्यवान् छन् भने, तपाईं सिक्न र आफ्नो कौशल सेट निर्माण गर्न धेरै अवसर पहुँच. त्यसैले, शिक्षा भइरहेको महत्त्वपूर्ण छ. यदि तपाईं आफ्नो उच्च विद्यालय उपाधि प्राप्त भएको छैन त, को RCO मुक्त GED कार्यक्रम तपाईंले एक प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ. तपाईं एक विशिष्ट प्रशिक्षण थप जानकारी आवश्यक भएमा, तपाईं आफ्नो स्थानीय पुस्तकालय वा इन्टरनेटमा पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं स्कूल उपस्थित चयन हुन सक्छ, तर तपाईं त्यो गाह्रो बनाउँछ एक अस्तित्व काम संग व्यस्त छन् भने, अनलाइन शिक्षा तपाईंलाई ठूलो विकल्प छ. तपाईं पनि प्राप्त नेतृत्व भूमिकाको लिएर वा नेतृत्व कार्यक्रम सामेल गरेर आफ्नो समुदाय संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ.
यहाँ म मेरो व्यक्तिगत र व्यावसायिक विकासको लागि प्रयोग केही वेबसाइटहरूले छन्. को पाठ्यक्रम शुल्क छ, तर तपाईंले आफ्नो व्यावसायिक विकास गर्न साँच्चै प्रतिबद्ध छन् र तिनीहरूलाई उठयो गर्न सक्षम छन् भने, अब आफैलाई लगानी तपाईं पछि राम्रो तलब प्राप्त गर्न सक्छन्.
Udemy.com अनलाइन सिक्ने मंच तपाईं सिक्न र आईटी मा नयाँ कौशल मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ छ, व्यापार, र प्रशासनिक क्षेत्रहरू, अरूलाई बीच.
Coursera अर्को अनलाइन शिक्षा प्लेटफर्म जहाँ तपाईं शीर्ष विश्वविद्यालय प्रशिक्षकहरु नयाँ कौशल सिक्न सक्छ. तिनीहरूले पनि जहाँ तपाईं अंग्रेजी सिक्न र आफ्नो संचार सीप सुधार गर्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रम छ. तिनीहरूले पूरा को प्रमाणपत्र प्रदान तपाईं आफ्नो रिजुम मा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ कि.
4. नेटवर्किंग तपाईं आफ्नो सही काम पाउन मदत गर्नेछ.
त्यहाँ भन्छन् कि संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक कहावत छ, “आफ्नो नेटवर्क आफ्नो निवल निर्धारण गर्नेछ।” म यो हामी संग आफूलाई चारै ओर मानिसहरू गहिरो तरिकामा हामीलाई असर किनभने साँचो हुन विश्वास. तिनीहरूले बुद्धि हाम्रो स्तर असर, स्वास्थ्य, र आय. त्यसैले, तपाईंको साथी वर्तमान समूह तपाईं मदत छैन भने तपाईं खोजिरहेका छन् लक्ष्यबाट हासिल, तपाईं नयाँ मान्छे भेट्न प्रयास गर्नुपर्छ जसले गर्न सक्छन्.
नयाँ मान्छे बैठक सुरुमा intimidating हुन सक्छ. तर यो सही जडानहरू बिना सही काम पाउन गाह्रो छ.
सामाजिक मिडिया प्रयोग आफ्नो सही काम पाउन एक विशाल भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्. फेसबुक प्रयोग, meetup.com, र eventbrite.com आफ्नो क्षेत्रमा सस्तो वा निःशुल्क घटनाहरू फेला पार्न. तपाईं घटना जाने अघि पेशेवर पोशाक. तपाईं लजालु लाग्छ भने, सम्झना सबैलाई एउटै उद्देश्य लागि छ. तिनीहरूलाई आफैलाई शुरू मानिसहरूलाई कुरा सुरु. उत्सुक हुन र आफ्नो क्यारियर खोज बारेमा प्रश्न, हालको जागिर, विद्यालय, वा परिवार.
अर्को तरिका आफ्नो व्यावसायिक सम्पर्क संग जोडिएको रहनुहोस् उपयोग गरेर हो LinkedIn. Here are some USAHello Training Webinars on how to set up your profile and start looking for jobs on Linkedin:
LinkedIn Webinar भाग म. तपाईंको Linkedin प्रोफाइल सेट गर्न कसरी
LinkedIn Webinar भाग द्वितीय. कसरी Linkedin प्रयोग जागिर खोज्दै सुरु
स्वयं बढ्न र तपाईं आफ्नो सही काम उधारो गर्न मद्दत गर्नेछ नयाँ अनुभव गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को छ.
अरूको सेवा गर्न आफ्नो समय दिने कार्यमा तपाईं राम्रो महसुस गर्नेछ. साथै, तपाईंको स्वयंसेवक अनुभव मौका को नयाँ ढोका खोल्न सक्छ. प्रबन्धकको वा अर्को स्वयंसेवक आफ्नो क्यारियर खोज बारेमा सल्लाह तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ. वा तिनीहरूले जो गर्न सक्छन् कसैले गर्न जडान गर्न सक्षम हुन सक्छ.
आफ्नो समय वा कौशल लाभ उठाउन भनेर आफ्नो समुदायमा संगठन खोज्न.
त्यहाँ शरणार्थी र आप्रवासी समुदायमा आवश्यक मद्दत धेरै छ. तपाईं resettlement केन्द्र मा स्वयंसेवक गर्न सक्नुहुन्छ, वा आफ्नो मूल-समुदाय संगठन मा. Volunteermatch.com आफ्नो शहर मा स्वयंसेवक वा इंटर्नशिप अवसर पाउन तपाईंलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने एक वेबसाइट.
6. समय व्यवस्थापन: अधिक तपाईं बढ्न, अधिक अवसर तपाईं हुनेछ.
यो बिन्दुमा, यो तपाईं अभिभूत छैनन् त आफ्नो प्राथमिकता आकलन गर्न महत्त्वपूर्ण छ. यो तपाईंको पारिवारिक दायित्व प्राथमिकता सर्वश्रेष्ठ छ, काम, र स्वयंसेवक मौका तपाईंले व्यक्तिगत र पेशेवर बढ्न रूपमा. बाहिर आंकडा तपाईं एक हप्तामा लागि लागू गर्न इच्छुक छन् कति जब, र यो कुनै कुरा के प्राप्त. जब तपाईं को लागि लागू गरेका छन् आफैलाई उत्प्रेरित गर्न को सूची राख्न.
शरणार्थी / अमेरिका मा आप्रवासी रूपमा आफ्नो सही काम पाउन यी छ वटा कदम पालना. यो तपाईं आफ्नो आदर्श काम पाउन भनेर ग्यारेन्टी छैन. तर, यदि तपाईं आफ्नो कौशल सुधार राख्न, नेटवर्किंग, र कठिन काम, यसलाई अन्ततः बन्द भुक्तानी गर्नेछ.
तपाईं एक काम पाउन मदत र काममा सफल हुन जानकारी.
बारेमा मोशाले Idris
मोशाले Idris Eritrea देखि मूल शरणार्थी छ. उहाँले एक कलेज विद्यार्थी छ र भविष्यमा आफ्नै व्यवसाय खोल्न चाहनुहुन्छ र अब एक प्रेरणादायक वक्ता बन्ने भूमिका लिइरहेको छ.